သက်ဝေ: မုန့်ဟင်းခါး ဋီကာ
Posted by သက်ဝေ at 12:35 AM
JuneOne April 22, 2013 at 9:48 AM
ပုံလေးပါပြပါ။အိမ်ကအမေကလဲ ငှက်ပျောအူဟာ အချိုဓာတ်တွေစုပ်တယ်ပြောဖူးတယ်...
Ama, Pls try 'Hmwe Mote hin khar A sone Hmote Htote' SGD1.50. You need to put fish.
ဂျစ်တူး ( မုံရွာ ) April 22, 2013 at 11:11 AM
မုန့် ဟင်းခါးကိုမစားရပေမဲ့ သားရည်ယိုသွားပါသည်။
ဒါနဲ့ စကားမစပ်( စပ်အောင်တမင်မေးလိုက်ပါသည်။)
မုန့် ဟင်းခါးကိုသောက်တဲ့ အချိန်မှာ မုန့်ဟင်းခါးအဖတ်ကိုထည့်ပြီးရင်-မုန့် ဟင်းခါးအရည်(ဟင်းရည်) ကိုမွှေနှောက်ပြီး
ခပ်ထည့်တာလား ဒါမှမဟုတ် မုန့် ဟင်းခါးအရည်ကိုအပေါ်ယံအရည်ဘဲယူပြီး
မုန့် ဖတ်နဲ့ ရောစားတာလား။ ဘယ်ဟာကမုန့် ဟင်းခါးစားနည်းအမှန်ဖြစ်ပါသလဲ
သိပ့် ကိုသိချင်နေပါသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးပါလား သက်ဝေ - - -
ဒါမှမဟုတ် ( သိတဲ့ သူတစ်ယောက်ယောက်ဖြေပေးကြပါလားဗျာ )
Kay Thwel April 22, 2013 at 11:49 AM
ကိုယ့်ဟာကိုယ် ချက်တော့မယ် ဆိုလို့.. အတော်လေးစားနေတုန်း..
အိမ်ကပို့ထားတဲ့ ငါးဆီသတ်တွေ တဲ့။း)
tin min htet April 22, 2013 at 2:15 PM
ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်တိုင်ပေမယ့် လွယ်တဲ့နည်းနဲ့ ချက်လိုက်တယ်။
ပဲကို များများပြုတ်ပြီး ကြိတ်၊ ဖရီဇာထဲ ခဲထားလိုက်တယ်။ မုန့်ဟင်းခါးဖြစ်ဖြစ်၊ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပဲပလာတာ ဖြစ်ဖြစ် အဆင်သင့် ဖြစ်သွားတယ်။
ငါးကို အရိုးမထွင်ရတဲ့ ငါးအသားလွှာသုံးတယ်။ အဲဒါကို ကြက်သွန်ဖြူနီ စပါးလင်နဲ့ ဆီသတ်တယ်။ ဂျင်းထည့်လေ့ မရှိဘူး။ဆန်လှော်မှုန့်ကတော့ နည်းနည်းပဲ သုံးတာနဲ့ အထုတ်ပဲ သုံးလိုက်တယ်။ ငှက်ပျောအူထည့်မနေတော့ဘူး၊ စိတ်ကူးပေါက်ရင် ကြာမြစ်ထည့်လိုက်တယ်။
:P April 22, 2013 at 2:16 PM
မနေ့ကမှ ချက်စားထားတဲ့ မုန့်ဟင်းခါး.. နောက်ရက် ထပ်ချက်ရအုံးမှာပ
မိုးငွေ့........ April 22, 2013 at 4:11 PM
ဟင့် ဟင့် မုန့်ဟင်းခါးနံ့ကလေးမွှေးနေရော ချားတောင်ချားချင်လာဘီ...။ ညီမလေးဆို တခါမှ ကွကိုယ်မချက်စားဖူးဘူး မမသက်ဝေ recipe နဲ့ စမ်းလုပ်ကြည့်ဦးမယ်
Hmoo April 22, 2013 at 4:44 PM
မောင်မျိုး April 22, 2013 at 6:09 PM
ဗိုက်ဆာလိုက်တာ ။ အမေ့ကိုလည်းသတိရသွားတယ် သားသမီးတွေစုံရင် အမြဲချက်ကျွေးတာက မုန့်ဟင်းခါးပဲ ။
ဒီကထိုင်းမုန့်ဟင်းခါးက လျှာမတွေ့ပါဘူးးးး ငါးရံ့နံ့လေးရနေတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးဟင်းရည်လေးပဲ လွမ်းတယ် ။
မြသွေးနီ April 22, 2013 at 6:31 PM
စားစရာ အတော်များများ ချက်တတ်ပေမယ့် မုန့်ဟင်းခါးဆို ချက်ရင် ကောင်းတယ်လို့ကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို မယုံကြည်ဘူး။ မုန့်ဟင်းခါး အိမ်မှာ အ၀စားချင်တိုင်း နန်းသပြေ ရယ်ဒီမိတ်အထုတ် ချက်စားဖြစ်တယ်။ ကြက်သွန်နီဥ၊ ပဲမှုန့်အကြက်နည်းနည်း၊ ကြက်သွန်ဖြူကြော်ထောင်း၊ ငရုပ်ကောင်းများများခပ်၊ အိုးဘဲဥ၊ ပဲသွေး ဖြည့်စွက်ပြီး ချက်စားဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီတံဆိပ်တော့ တခြားဟာတွေထက် ကြိုက်မိတယ်။ ငှက်ပျောအူကတော့ အတူတူပဲ၊ တစ်ခါမှ ထည့်မစားဖြစ်ဘူး။ နောက်လူကြုံရှိရင် နန်းသပြေထည့်ပေးလိုက်မယ် အစ်မသက်ဝေ..။ စမ်းစားကြည့်ရအောင်။
ကြည်ဖြူပိုင် April 22, 2013 at 9:50 PM
အရသာရှိတဲ့ စာတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်လို့
ဆုမြတ်မိုး April 23, 2013 at 9:24 AM
Ma Tint April 24, 2013 at 6:38 PM
အဆင်သင့်ချက်စားလို့ရတဲ့ မုန့်နှစ်အရသာနဲ့ အိမ်ချက်ကတော့ ကွာတယ်မသက်ရေ... တီတင့်မုန့်ဟင်းခါးချက်ရင် ဆန်လှော်မှုန့်နဲ့ ရွှေကြည့်မှုန့်ပဲသုံးတယ်။
မသက်ရဲ့ မုန့်ဟင်းခါးလေးအခွင့်ရေးရရင်မြီးချင်တယ် :P
မမသက်ဝေ ကြည့်ပြီး ဘိုက်ဆာသွားတယ် နေ့တိုင်း ကျွေးရင်စားနိုင်တဲ့ အစားအစာပြဆို မုန့် ဟင်းခါးပဲ... :)